Ubuhle - Bezzia | Bezzia
La ubuhle kuyinsimu ebanzi kakhulu, lapho abesifazane bethola indlela yokubukeka bebahle ngokwengeziwe, njengabaningi futhi bazizwe bekhululekile. Ngalesi sizathu, kusuka kumagazini wethu sibheka ukubaluleka okukhulu kulesi sici, esihlanganisa izindawo ezahlukahlukene zobuhle, ngaso sonke isikhathi ngokubuka kobungcweti futhi sinikeza zombili izeluleko zokwenza amaqhinga nezindaba zakamuva ezivela kumikhiqizo ehlobene nalo mhlaba.
Kulesi sigaba, sizokutshela amathiphu wokuqalisa kabusha izingxenye ezahlukene zomzimba wakho, sizoncoma imikhiqizo sokwenza lokhu futhi sizobheka nosaziwayo ukuzama ukulandela ukwakheka kwabo kobungcweti, ngokwesibonelo.
Ukulungisa, zezinwele, izipikili, amakha noma imishanguzo yobuhle nayo izobakhona kulesi sigaba, esizohlale sisesikhathini futhi esizokutshela zonke izimfihlo zokubukeka uphelele.
Ungasifaka kanjani isikhafu: Imibono esheshayo nesebenzisekayo
Por USusana godoy kwenza Izinsuku ze-2 .
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungabeka kanjani isikhafu? Isibe esinye sezesekeli ezinhle ebuhleni bethu. Ngoba uyakwazi…
Ikhava ye-tattoo: Imibono engcono yokuyithola
Ngabe ufuna ukumboza i-tattoo? Mhlawumbe ukwenzile ngakho konke ukukhohlisa emhlabeni kepha kufika isikhathi lapho ...
Okhiye bokuthola izinwele zethusi ezinhle
Por UToñy Torres kwenza Izinsuku ze-3 .
Izinwele zethusi zigcwele umkhuba, zibonakala nsuku zonke kuma-catwalks emhlabeni jikelele, ...
Amathiphu okwenza izimonyo wabaqalayo
Por UToñy Torres kwenza Izinsuku ze-5 .
I-Makeup imnandi, iwubuciko, iyadlala futhi ifanelekile kubo bonke abafuna ukuyisebenzisa njengendlela ...
Ungasifaka kanjani isicelo se-blush ngokobuso bakho
Por USusana godoy kwenza Izinsuku ze-7 .
Uyazi ukuthi ungasifaka kanjani isicelo blush? Kubukeka sengathi kulula kakhulu futhi akukhona ukuthi kufanele sizenze nzima kakhulu, kepha ku ...
Por USusana godoy kwenza Isonto eli-1 .
Ama-eyelashes nawo kufanele awanakekele njalo, ngoba azosinika ukubonakala okuningi ebusweni futhi ngoba kuyingxenye eyisisekelo ye ...
Ngabe ufuna ukuthola i-pedicure yobungcweti? Ngakho-ke akukho okufana nokulandela uchungechunge lwezinyathelo eziyisisekelo nokuziqalela ukukwenza ngokunethezeka ku ...
Izinyathelo ezibalulekile zesimiso esihle sobuhle
Por UToñy Torres kwenza Isonto eli-1 .
Ukulandela inqubo enhle yobuhle kubalulekile ukujabulela isikhumba esinempilo futhi esihle. Kepha namhlanje ...
Izitayela ezi-4 zokwakheka kuka-2021
Por UToñy Torres kwenza Amaviki angu-2 .
Ekwindla kungqongqoza emnyango futhi ngayo, izitayela ezintsha zokwenza izimonyo eziza ukunikeza umbala ku ...
Izitayela ezinkulu zemibala yezinwele kulokhu kuwa
Por USusana godoy kwenza Amaviki angu-2 .
Uma kunezitayela ezinhle zemfashini zesizini entsha, kuzoba khona futhi ngokuya ngemibala yezinwele….
Ungazikama kanjani izinwele emuva emadodeni
Ngabe ufuna ukukhombisa isitayela samanje sezinwele ngezinwele emuva emadodeni? Yize kujwayelekile nakwabesifazane ukubona ...
Ungayiphatha kanjani isipikili esimnyama
Indunu noma ukwenza mhlophe isitho sangasese
Ubuso buvuvukile lapho kuvukwa, izimbangela zayo namakhambi ayo
I-Hydrogen peroxide ezinweleni, ebuhleni nasemsebenzini wayo
Kunconywa kangaki ukuthi kudaye
Ukhilimu wesitho sangasese sowesifazane
Ungalisusa kanjani iphunga likagwayi ezinweleni zakho
Ungayelapha kanjani isipikili
Ungayisebenzisa kanjani i-aloe vera ezinweleni
Ungawasusa kanjani uwoyela ezinweleni, amaqhinga asebenza ngempela
Izinhlobo zokuqondisa izinwele nokuthi ukhethe muphi
Ungazomisa kanjani izinwele ezihlanzekile
Ungakunciphisa kanjani ukuvuvukala kwenduna, amaqhinga amahle kakhulu!
Ama-enamel akufanela kahle ngokwethoni yesikhumba sakho
Amathoni wezinwele athopha kakhulu kwabesifazane abangama-brunette
Izinganekwane namaqiniso ngamadayi angenayo i-ammonia kufanele wazi